တာဝန်သိသိလောင်းကစားခြင်းမူဝါဒ | SBOTOP Information Center
Reference Number: AA-00211 Last Updated: 2019-06-11 13:490Rating/ Voters
အော်ပရေတာ (SBOTOP)သည် အသုံးပြုသူအား တာဝန်ယူမှုရှိသောလောင်းကစားနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ပေးရန်ဟူသည့် အချက်ကိုအခိုင်အမာထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ လောင်းကစားခြင်းကိုအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာ ကစားသင့်သော်လည်း၊ သုံးစွဲသူများ၏ ဂရုမမူမှုကြောင့်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေသည်။ အော်ပရေတာသည် စိတ်မထိန်းနိုင်လောက်အောင် ကစားခြင်းအားတားမြစ်ရန်နှင့် အသက်မပြည့်မီသူများအား ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဂိမ်းများအသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ရန် ရည်ရွယ်သကဲ့သို့ တစ်ဖက်တွင်လည်းဖော်ရွေစွာဖြင့် လောင်းကစားခြင်းဖျော်ဖြေမှု အတွေ့အကြုံများကို အသုံးပြုသူများအားပေးနေပါသည်။ တာဝန်သိသောလောင်းကစားအော်ပရေတာအနေဖြင့် အသုံးပြုသူများစိတ်ချမ်းသာရေးသည် အင်မတန် အရေးကြီးပါသည်။
The Operator has implementedaself-exclusion function for Customers who might need assistance in handling their compulsive gambling habits. The Customer may opt to self exclude themselves from having access to the Internet Betting Service or the Betting Platform foraperiod of either7days, 30 days, 90 days or forapermanent self-exclusion you may email our customer service. The Customer may also set their own maximum value for their wagering activity fora7 day period for Sports, Racing and Games separately. In the Casino, the Customer is able to set an amount as the Maximum Betting Loss to limit the amount that the Customer can lose inarolling7day period. The Customer can also setadaily,7day or 30 day deposit limit to limit the amount that can be deposited by the Customer for that period. The following areafew things the Customer should remember in order to keep control while gambling: